May 2018 - Page 2 of 8 - Puntland Mirror Believable Media Website
Lasanod-(Puntland Mirror) On 28 May 2018 a peaceful demonstration in Lasanod town turned into violence when Somaliland authorities responded with the use of disproportionate atrocious force and live ammunition against the civilian demonstrators. Large crowds of […]
May 28, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Boqolaal qof ayaa ka qeybgalay mudaharaad ka dhacay magaalada Laascaano ee gobolka Sool, sida uu baahiyay taleefishinka dowladda Puntland ee PL TV. Mudaharadayaasha ayaa sheegay in aysan taageersanayn maamulka Somaliland, aysana dooneyn in […]
May 27, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in dowladda federaalka Soomaaliya aysan qayb ka aheyn dagaalka Tukaraq. Bayaan kasoo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri: “dowladda Puntland waxay cadeynaysaa in dowladda federaalka Soomaaliya aysan qayb ka ahayn […]
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo dhiggiisa Itoobiya Abiy Ahmed ayaa kulan ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee caasimada Itoobiya. Labada masuul ayaa ka wadahadlay xiriirka u dhaxeeya labada dal, sida ay […]
May 25, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ku celiyay in la joojiyo dagaalka Tukaraq. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta oo Jimce ah ka hadlayay masjid kuyaala Muqdisho ayaa yiri: “Waxaan rabaa inaan […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Wax dagaal ah kama uu jiro deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool maanta oo Jimce ah, sida ilo-wareedyo ciidamada katirsan ay sheegeen. Xaalada deegaanka ayaa degan mana ay jiraan wax iska hor imaad ah […]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 10 maleeshiyo oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku geystay, sida ay bayaan ku sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika maanta oo Khamiis ah. Weerarka ayaa Arbacadii ka dhacay meel […]
Mogadishu-(Puntland Mirror) At least 10 Al-Shabab militants killed in U.S. airstrike, U.S. Africa Command said in a statement on Thursday. The attack happened about 15 miles southwest of Mogadishu on Wednesday, according to U.S. Africa […]
Garowe-(Puntland Mirror) dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo Somaliland ee deegaanka Tukaraq ayaa qaboobay, sida ilo-wareedyo ciidamada katirsan ay u sheegeen warsidaha Puntland Mirror. Dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramay in khasaare weyn uu ka dhashay […]
Garowe-(Puntland Mirror) A heavy fighting between the forces of Puntland and Somaliland erupted in Tukarak area of Sool region on Thursday morning, military sources confirmed to Puntland Mirror. There are several soldiers from Puntland and […]